के ब्रान्ड विज्ञापनले काम गर्दछ? | Martech Zone
के ब्रान्ड विज्ञापनले काम गर्दछ? Lab42 ले भर्खर सोधे र परिणामहरू सँगै यो इन्फोग्राफिक राख्यो।
हामीले उपभोक्ताहरूले विज्ञापन दावीहरू हेर्ने तरिकामा हेराई गर्ने निर्णय गरे, र उनीहरूका विचारहरूले एउटा रमाईलो चित्रण गरे। केवल%% ले विज्ञापनहरूमा दावीहरूलाई एकदम सहि वर्णन गर्दछ, र २१% मात्र विज्ञापन वर्णन गर्दछ केही हदसम्म सहि। हामीले ठ्याक्कै पत्ता लगायौं कि विज्ञापनका कुन-कुन भागहरूमा उनीहरू विश्वास गर्दैनन् - लगभग सबैले फोटोशपलाई विज्ञापन छलको तत्वको रूपमा औंल्याए। जाँच गर्नुहोस् Lab42 बाट तल इन्फोग्राफिक विज्ञापन धारणा, ब्रान्ड धारणा, र यदि ब्रान्ड विज्ञापन वास्तवमै काम गर्दछ मा अन्तरदृष्टि को लागी।
तिनीहरूलाई विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, संदिग्ध ब्रान्ड विज्ञापनले काम गर्दछ कि गर्दैन अन्तमा उत्तर दिइन्छ कि उपभोक्ताहरूले खरीद गरेका छन वा गर्दैनन्। म एउटा विज्ञापन हेर्न सक्छु जसमा भन्छ कि म मेरो लिड्स डबल गर्न सक्छु र अझ पनी खरीद गर्न सक्दछु जुन उनीहरूले पक्कै आशा गरेनन् डबल। सायद, विज्ञापन पढ्ने क्रममा, म विश्वास गर्छु कि रणनीति विवेकी र परीक्षण योग्य छ। संक्षेप मा, मेरो विज्ञापन को बारे मा धारणा नकारात्मक हुन सक्छ, तर म अझै खरीद गर्न सक्छ।
अवश्य पनि, मैले तपाईंको विज्ञापनहरू बेच्न झूट झूटको वकालत गरिरहेको छैन। जहाँसम्म, केहि महान तथ्या .्क औंल्याउँदै, एक पुरस्कार, एक ग्राहक बाट एक असाधारण परिणाम कसैको ध्यान आकर्षित गर्न पर्याप्त हुन सक्छ। यो अपेक्षा हो कि तपाईंले आफ्नो ग्राहकको साथ सेट गर्नुभयो जुन कुञ्जी हो!
टैग: विज्ञापन बोधविज्ञापन धारणाब्रान्ड विज्ञापनइंफोग्राफ़कप्रयोगशाला।प्रयोगशालाधारणा
जनवरी १, २०१6१२::2013 अपराह्न
मलाई मनपर्दछ 'विज्ञापनले के गर्नुपर्दछ' मलाई शिक्षित गर्नुहोस्, मलाई उत्पादनहरू बारे सचेत गराउनुहोस् र मसँग सम्बन्धित ...। कतै पनि यसले मलाई बेच्दैन भन्छ!